Horudhac: Liverpool vs Southampton… (Reds oo doonaysa inay sii wadato guulaheeda xiriirka ah marka ay maanta Saints ku soo dhoweynayso Anfield) – Gool FM
Horudhac: Liverpool vs Southampton… (Reds oo doonaysa inay sii wadato guulaheeda xiriirka ah marka ay maanta Saints ku soo dhoweynayso Anfield)
Haaruun February 1, 2020
(Liverpool) 01 Feb 2020. Kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa doonaysa inay sii wadato guulaheeda xiriirka marka ay garoonkeeda Anfield Maqribnimada maanta ku soo dhoweynayso Naadiga Southampton.
Kooxda Jurgen Klopp ayaa ku sii dhawaanaysa hanashada horyaalka Premier League kaddib markii ay 2-0 ku dhufteen West Ham United kulankoodii ugu dambeeyey horyaalka Ingiriiska oo ay ciyaareen Habeenkii Khamiista, laakiin waxa ay wajahayaan maanta Southampton oo kaalinta 9-aad kaga jirta kala sarreynta Premier League.
Taariikhda: Sabti, 01 Feb 2020
Saacadda ay bilaabaneyso dheesha: 06:00 Maqribnimo xilliga geeska Afrika.
Garsooraha: Kevin Friend (England)
Weeraryahanka kooxda Liverpool ee Sadio Mane ayaa qarka u saaran inuu seego kulanka ay Anfield soo booqanayso kooxdiisii hore ee Southampton, maxaa yeelay waxa uu qabaa dhaawac muruqa ah.
Laakiin saaxiibkiisa hore ugu soo ciyaaray Saints ee Adam Lallana ayaa ka soo kabsaday virus, Divock Origi ayaa sidoo kale taam ah markale, laakiin James Milner iyo Xherdan Shaqiri ayaa seegi doona kulankan.
Laacibka khadka dhexe ee Southampton, Stuart Armstrong ayaa la maqnaan doona dhaawac ka soo gaaray misigta kulankii ay barbaraha la galeen Spurs ee FA Cup-ka.
Jannik Vestergaard ayaa taam ah kaddib markii uu ku dhacay shoog-maskaxeed, laakiin saxiixa cusub ee Kyle Walker-Peters ayaan sameyn doonin safashadiisii ugu horreysay ee Saints.
Tababare Ralph Hasenhuttl ayaa sheegay inuu doonayo inuu siiyo ciyaaryahanka amaahda ku jooga ee Spurs waqti dheeri ah si uu u saldhigto kooxda.
>- Liverpool ayaa guuleysatay shanteedii kulan ee ugu dambeeyey horyaalka Premier League oo ay wajahday Kooxda Southampton, waxaana ay ka dhalisay 13 gool, halka laga dhaliyey kaliya labo gool waqtigaas.
>- Southampton ayaa guuleysatay saddex ka mid ah 30-keedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay ciyaaraha sare la dheeshay Liverpool, waxaana ay kala kulantay 10 Barbaro iyo 17 Guuldarro, waana guul la’aan shan kulan (2 Barbaro iyo 3 Guuldarro) tan iyo guushii 1-0 ahayd oo ay gaareen bishii September sanadkii 2013-kii.
>- Liverpool ayaa guuleysatay 19-keedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay horyaalka Premier League ku ciyaartay garoonkeeda, kaliya Manchester City ayaa guulo intaas ka badan ku haysata garoonkeeda tartankan, taasoo adkaatay 20 kulan intii u dhaxaysay March 2011 illaa March 2012, xaqiiqdii ciyaaraha sare ee horyaalka kaliya afar kooxood ayaa guul garay 20 kulan ama wax ka badan oo xiriir ah garoonkooda kulammada horyaalka, Liverpool ayaana haysata rikoorkan inta ugu badan taasoo adkaatay 21-kulan oo isku xiga iyadoo horyaalka ku dheeleysa garoonkeeda intii u dhaxaysay January illaa December sanadkii 1972-kii.
>- Southampton ayaa guuleysatay kaliya afar jeer 40-keedii kulan ee ay horyaalka Premier League booqatay kooxaha Merseyside-ka ee Everton iyo Liverpool, waxaana ay kala kulantay 11 Barbaro iyo 25 Guuldarro, iyadoo aan guuleysan 11-keedii booqasho ee ugu dambeeyay (4 Barbaro iyo 7 Guuldarro ayayna soo qaateen).
>- Iyadoo aan laga badinin 52 kulan oo Premier League ah oo ay garoonkeeda ku ciyaareen, Liverpool ayaa gool dhalisay mid kasta oo ka mid ah 27-keedii kulan ee ugu dambeeyay ee ay ku ciyaaraan garoonkooda Anfield, markii ugu dambeysay ee ay dhaliyeen goolal intaas ka badan si xiriir ah ciyaaraha sare ee horyaalka waxay ahayd intii u dhaxeysay bishii May 1967 iyo February 1969-kii, markaasoo ay gool dhalinayeen 38 kulan.
>- Southampton ayaa guuleysatay afarteedii kulan ee ugu dambeeyey Premier League oo ay marti ahaayeen (Away), hal jeer oo kaliya ayay taariikhdooda ku guuleysatay Saints shan jeer oo isku xigta oo ay jidkaas maraysay, iyadoo sidaas sameysay intii u dhaxaysay bilihii April ilaa August 2011-kii, waxaana ay ka sameeyeen League One iyo Championship-ka.
>- Weeraryahanka Liverpool ee Mohamed Salah ayaa ku lug yeeshay lix gool shantii kulan ee Premier League uu ku wajahay Southampton waxa uu ka dhaliyey 5 gool isagoo ku dhiibay 1 gool oo kale, waxaana saddex gool uu ku dhaliyey labo kulan oo uu kula ciyaaray garoonka Anfield.
>- Gooldhaliyaha ugu sarreeya Southampton xilli ciyaareedkan ee Danny Ings ayaa gool dhaliyey kulankii ay Saints 1-2 kala kulantay Liverpool bishii August, kaliya labo ciyaaryahan ayaa minin iyo marti (Home and Away) goolal kaga dhaliyey Liverpool hal xilli ciyaareed gudihiis, waxaana Reds horay goolal uga dhaliyey minin iyo marti tartankan labada xiddig ee kala ah Dean Saunders xilli ciyaareedkii 1992-93 iyo Jonjo Shelvey kal ciyaareedkii 2013-14.
Horudhac: Leicester City vs Chelsea… (Blues oo booqanaysa King Power xilli ay maanka ku hayso inay soo yareyso dhibcaha kaalinta saddexaad ee Foxes)
Horudhac: Real Madrid vs Atletico Madrid… (Wax waliba oo aad uga baahan tahay kulanka maanta ee Madrid Derby)